Unknown Mon Apr 23, 01:12:00 PM GMT+8
ကြိုက်တယ်ဗျာ...အမရေ... အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲရောဘဲ.. :)
တီချမ်း Mon Apr 23, 01:14:00 PM GMT+8
အိုင်ပက် တလုံး ပဲ ခေါင်းထဲရောက်စ်
အင်ကြင်းသန့် Mon Apr 23, 01:32:00 PM GMT+8
TPTဆိုတာ Traffic Police of Ta-wa-rain-thar တဲ့လား.... :P
သိင်္ဂါကျော် Mon Apr 23, 03:56:00 PM GMT+8
ဝတ္တုလေး ကောင်းလိုက်တာ.. အတွေးလေး သစ်တယ်..
ညီလင်းသစ် Mon Apr 23, 06:24:00 PM GMT+8
ဟား.. သဘောကျလိုက်တာ မချစ်ကြည်အေးရေ...၊ ရေးတတ်ပါ့ဗျာ၊း)
စကားလုံးတွေ စီးဆင်းသွားပုံများ.. လျှောကနဲ လျှောကနဲပဲ၊ ဖတ်ရတာ ညက်လွန်းတဲ့အပြင် ဇတ်ရုပ်တွေ ရွေးတာလည်း ကောင်းမှကောင်း၊ ဘုရား ဂေါပက၊ ပွဲစား၊ မိခင်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး.. ဟားဟား၊ ပြောင်မြောက်လွန်းတဲ့ satire တစ်ပုဒ်ပါပဲဗျာ..၊ Thumbs up sis !!!
Cameron Tue Apr 24, 01:21:00 AM GMT+8
တွေ့လား ချစ်ကြည်အေးဆိုတာ ခေသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာ..ငွှားငွှား...။
Z@! Tue Apr 24, 06:06:00 PM GMT+8
ဘူးညွှန့်က ဖရုံညွှန့်လောက်တော့ ကောက်မပေါ့နော..
San San Htun Sat May 05, 08:07:00 AM GMT+8